पेटको भोक र घरको सम्झना
खाना होस् कि नहोस्, खुट्टा नाङ्गै होस्, बालबच्चा र कुटुरो च्यापेर श्रम गर्न राजधानी र विभिन्न भागमा गएका श्रमिकहरु यसरी घर फिर्दैछन् ।
पेटको भोकभन्दा महत्व छ, आफ्नो घरको । यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने शासक र प्शासकले हो ।
तर, श्रमिकहरु लकडाउनमा सवारी साधन नपाएपछि यसरी घर फिर्दैछन् । हजारौं किलोमिटर हिडेर घरपुग्ने सपना छ यिनको । लाकडाउन अघिसम्म काम गर्ने र दुईपैसा कमाउने भोक थियो । आज नाना, दाना र खाना केही नभए पनि यिनीहरु डेरा त्यागेर घरतिर हिड्दैछन् । काम नभएपछि आन्दानी हुने कुरा भएन, बसौं कति दिन बस्ने ? खाने के ? राहतमा ारजनीतिकरण भएपछि त यिनको जीवन झन भयावह बन्यो । बरु भोकै हिडेर घरमै पुग्ने भनेर यसरी हिड्नेको लर्को सडकभरि, राजमार्गभरि, जताततै देखिन्छ । कोरोनाको भयभन्दा भोकको पीडा छ यिनमा ।
हुन त सरकारले महामारीबाट बचाउन लकडाउन गरेको हो । सरकारले यसरी गरिखाने बर्गले जीवन दाउमा राखेर घरतिर हिड्छन् भन्ने अनुमान नै गरेन शायद । सरकारले भयानक आलोचना खपेपछि प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए– खान देउ, खानाको प्रवन्ध गरिदेउ । सर्वोच्च अदालतले सुरक्षितसाथ घर घरमा पु¥याइदिनु भन्ने आदेश दिएपछि प्रधानन्त्रीको निर्देशन आएको हो तर न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गरेको छ, न सरकारको निर्देशन मातहतका निकायले माने । मन्त्रीहरु तमासे बनेर बसेका छन् । सरकारभन्दा आम जनतामा संवेदनशीलता देखियो । कतिपयले जुत्ता चप्पल, पानी, खानेकुरा बाटो बाटोमा राखिदिए । बालबालिका र बृद्धबुद्धा, आमाहरुले डाँको छाडेर रोएको दृश्य यति दर्दनाक थियो कि यसले छाती भएको सरकारको छाती चिरिनु पर्ने हो । तर एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेर नहुनेरहेछ । सरकार भनेको संस्था हो र संस्थामा टिम वर्क, समन्वय नभएपछि सरकार यसरी पनि असफलतातिर लाग्दोरहेछ ।
दैनिक जिविकाका लागि आएका हुन् यी भुइँमान्छेहरु सहरमा । मरे पनि आफ्नै घरआँगनमा मर्ने र जाने जाने निधो गरेर घरतिर हिडेका हुन् यी भुइँमान्छेहरु । नेकपालाइ चुनाव जिताउने, नेकपाको भर विश्वास गर्ने यो जमातलाई नेकपाले आज साथ दिएको देखिन्न । यस्तै बेलामा जनताले सरकार, पार्टी, नेता, समाजसेवी खोज्ने हो । अरु बेलामा त पसिना बगाएर खाइहाल्छन् नि । तर व्यवस्थापन सफल हुनसकेन, सरकार आलोचना खेपिरहेको छ, खपिरहेको छ ।
यति नै बेला सरकारले कटवासले पनि यी बर्गलाई कुटेको छ । कतै छेकेको र थुनेको छ । कतै प्रहरी आफै बिलखबन्दमा र रोएको पनि छ ।
जनमतको कदर गर्ने बेला हो यो, सरकारले तत्काल यी जनता र यिनको जनबल, जनमतको सम्मान गरेर यस्ता बर्गलाई राहतको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी छ । सरकार धनाध्येलाई कमाउन चाहिएला, यो बर्गको लागि बाँच्ने सहारा र परेको बेलामा सघाउने आशा पनि हो । त्यो आशाको त्यान्द्रोलाई नेकपाको सरकार, नेकपाको पार्टी र सबैले सम्मान गर्नैपर्छ ।